Ka faa'iidayso soo jeedinta 11.11 ee Redmi Buds 3 Pro iyo POCO X3 Pro waqti xaddidan | Androidsis
Ka faa'iidayso bixinta 11.11 ee Redmi Buds 3 Pro iyo POCO X3 Pro waqti xaddidan
daniplay | 10/11/2021 15:16 | La cusbooneysiiyay 10/11/2021 15:21 | Mobiles, Qalabka kale
Noofambar 11-keeda waxaa loo calaamadeeyay inay tahay mid ka mid ah taariikhaha ugu muhiimsan ee la doonayo in la helo tignoolajiyada cusub iyo alaabada kale ee macaamiisha. AliExpress on 11.11 waxay leedahay soo jeedinno badan oo aad u xiiso badan taasina waxay heli doontaa malaayiin macaamiil ah oo ka kala yimid meel kasta oo adduunka ah.
Dalacsiinta waa badan yihiin, laakiin laba qalab ayaa taagan, mid ka mid ah waa Redmi Buds 3 Pro headphones, laakiin sidoo kale POCO X3 Pro casriga ah. Labaduba waxay ku yimaadaan qiimo xiiso leh, iyagoo ku habboon in si sax ah loo helo hadiyad ahaan maalmaha dhalashada ama si wanaagsan loogu fikiray xilliga kirismaska ​​​​.
Midka ugu horreeya waa qalab maqal oo qumman oo had iyo jeer lagu xidho, ama la muusik ama wac si raaxo leh. Midda labaad waa talefan ku habboon wax kasta, haddii loo isticmaalo aasaaska, ciyaaro cinwaan kasta oo xitaa u isticmaal jawiga ganacsiga haddii loo baahdo.
Hel Redmi Buds 3 Pro dhegaha-dhegaha oo leh xayeysiis Aliexpress via xidhiidhkan, kugu habboon ama aad wax ku bixiso kirismaska.
POCO X3 Pro ayaa sidoo kale ku raaxaysan doona bixintan, waxaanad kaga faa'iidaysan kartaa xidhiidhkan. Mobil ku habboon in uu yeesho waxqabad ka badan oo cajiib ah oo qiimo jaban ah.
2.1 Macluumaadka farsamada
3 Redmi Buds 3 Pro iyo POCO X3 Pro ee xayeysiinta
Tayada iyo qiimuhu maaha kuwo is dhaafiya, taasi waa waxa Xiaomi ay ahayd inay ka fikirto markii ay bilaabaysay Redmi Buds 3 Pro taleefoonnada gacanta. Qalabka dhegaha ee ugu fiican ee dhammaan noocyada kiisaska, ha ahaato in la dhegeysto heeso tayo sare leh, ama in la waco qof, dhammaan iyada oo aan innagu mashquulin haddii aad waddo ama meelo kale joogto.
Redmi Buds 3 Pro waxay la timid joojinta qaylada firfircoon, Mid ka mid ah awooddeeda, laakiin ka taagan tan sababtoo ah waxay gaartaa 35 dB. Sameecado kastaa wuxuu ogaan doonaa qaylada agagaarkeeda, isagoo la qabsanaya baabi'inta lagama maarmaanka u ah wakhtigaas, raaxo si aynaan ugu qasban inaan gacanta ku samayno.
Redmi Buds 3 Pro waxay ku daraysaa saddex makarafoon mid kasta oo ka mid ah sameecadaha dhegaha, loogu talagalay inay awoodaan inay la hadlaan dadka aan rabno wakhtigaas. Codka ku jira wicitaanada waa mid tayo sare leh, isaga oo ka hortagaya in codka dibadda uu soo galo, sidaas darteed waxaa ka shaqeeyay soo saaraha ka hor inta aan la bilaabin.
Madax-bannaanida Redmi Buds 3 Pro waa wadar ahaan 28 saacadood, 6 saacadood iyada oo aan loo baahnayn in la isticmaalo kiiska, ka fogaanshaha inaad ka saarto mar kasta. Marka laga reebo waxaas oo dhan, Buds 3 Pro waxay leeyihiin dallacaadda wireless-ka iyadoo la adeegsanayo estcuhe, wax ka dhigaya mid qumman haddii aan rabno inaan helno madaxbannaani dheeraad ah.
Sifooyinkeeda kale waxaa ka mid ah Redmi Buds 3 Pro waxay bixisaa iska caabin IPX4 ka hortagga qulqulka biyaha, joojinta heesaha haddii aan ka saarno sameecadda, mid kasta oo ka mid ah taabo xakamaynta, iyo waxyaabo kale. Google Fast Pair waxa uu ogolaadaa isku xidhka sameecaadaha iyo telefoon kasta oo hoos yimaada nidaamka Android.
BATARY Ilaa 6 saacadood oo wakhtiga ciyaarta hal lacag ah iyada oo aan la joojin buuqa la hawlgeliyay - Ilaa 28 saacadood oo wakhti ciyaar ah taleefoonnada gacanta oo kiis wata oo aan sanqadh firfircooni joojinayn - Kiis ku dallaca wireless-ka
BALINTA BAQAALKA Joojinta buuqa ee muusiga iyo wicitaanada - Saddex makarafoon oo dhegaha ku dheggan - 35 dB dhimis
MUUQAALO KALE USB-C si loogu dallaco kiiska - IPX4 ka ilaalinta biyaha - Google Fast Pair
Qiyaasaha iyo Miisaanka 25.4 x 20.3 x 21.3 mm taleefoonnada gacanta - 65 x 48 x 26 mm kiiska / 10 garaam oo taleefoonnada gacanta ah iyo 55 garaam kiiska
Waa mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu xiisaha badan suuqa iyada oo ay ugu wacan tahay wax kasta oo ay ku jiraan. POCO X3 Pro waa aalad mobilada oo loogu talagalay isticmaalayaashaas kuwaas oo u baahan terminal 4G ah oo xawaare leh, ha ahaato hawlaha ugu badan iyo sidoo kale inay ku ciyaaraan.
POCO X3 Pro waxay ku dhejisaa guddi 6,67-inji ah Nooca IPS oo leh HD Full + xallinta, oo muujinaya heerka soo kicinta ee 120 Hz iyo 240 Hz muunad taabashada. Iska caabinta waxaa dhigay Gorilla Glass oo wata nooca 6, marka laga reebo waxay leedahay 450 nits iyo HDR10 isku dhafan sida caadiga ah ee soo saaraha.
Processor-ka ku rakiban waa Snapdragon 860, inkastoo uusan ahayn 5G, waa mid ka mid ah kuwa ugu dhaqsaha badan nooc kasta oo hawl ah oo aan soo jeedinno. Waxaa taageeraya chip-garaafyada Adreno 640 ee 667 MHz, Waa ku haboon haddii aan rabno in aan u ciyaaro nooc kasta oo horyaalka nidaamka hawlgalka Android, emulators, iyo kuwo kale.
Waxaa jira laba ikhtiyaar oo loogu talagalay RAM iyo kaydinta, 6/8 GB marka hore, halka labaadna uu noqdo 128/256 GB. Batteriga qaabkani waa awood sare, laga bilaabo 5.160 mAh oo leh lacag degdeg ah oo ah 33W, markaa ku dallacaadda 0 ilaa 100 waxay ku kici doontaa wax ka badan 40 daqiiqo.
Ku dheji wadar ahaan afar kamaradood oo danbe, dareemaha ugu weyn waa 48 megapixels, ka labaad waa 8 megapixel xagal ballaaran, makro waa 2 megapixels iyo qoto dheer ee afraad 2 megapixels. Kamarada hore waxay gaartaa 20 megapixels, oo ku habboon shirarka fiidiyowga, sawir-qaadista iyo waxyaabo kale oo badan.
YAR X3 PRO
MUUQAAL WAYN IPS LCD 6.67 inji - Full HD + xallinta - 120 Hz heerka soo kicinta - 450 nits - Gorilla Glass 6 - HDR10
PRORESOR Qualcomm Snapdragon 860
KAADHKA CARRUURTA Adreno 640 ilaa 672 MHz
KAAMARKA DAR 48 MP f / 1.79 AF - xagal ballaadhan 8 MP f / 2.2 119 ° - Macro 2 MP f / 2.4 FF - qoto dheer 2 MP f / 2.4 FF
KAAMI HOR 20 MP f / 2.2
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 11 ee hoos yimaada lakabka MIUI 12
BATARY 5.160 Mah oo leh 33W lacag deg deg ah
Isku xirnaanta 4G / LTE - Wi-Fi - Bluetooth 5.0 - NFC - GPS - Jack 3.5 mm - Infrared
DHIBAATOOYINKA Dual SIM (isku-dhafan) - Ku-hadlayaasha isteeriyo-dareenka sawirka faraha
Qiyaasaha iyo Miisaanka 165.3 x 76.8 x 9.4 mm / 215 garaam
Redmi Buds 3 Pro iyo POCO X3 Pro ee xayeysiinta
Taleefannada dhegaha ee Redmi Buds 3 Pro waxay ku dhexjiraan xayeysiinta 11.11 ee AliExpress Iyada oo loo marayo xidhiidhkan, oo leh qiimo run ahaantii la awoodi karo. Waxay yihiin hadiyadda ugu fiican, haddii aan rabno inaan bedelno sameecaadaha hadda jira, nafteena hadiyad siiya ama aan ka fikirno sameynta mid ka hor taariikhda Kirismaska.
POCO X3 Pro sida Redmi Buds 3 Pro waxay ku jiraan xayeysiinta 11.11 ee AliExpress iyada oo loo marayo xidhiidhkan qiimo dhimis la taaban karo. Waa talefan heersare ah oo loogu talagalay dhammaan noocyada xaaladaha, maadaama uu ballan qaadayo madaxbannaanida isticmaalka wax ka badan hal maalin oo ku habboon isticmaalka apps, ciyaaraha iyo waxyaabo kale oo badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Ka faa'iidayso bixinta 11.11 ee Redmi Buds 3 Pro iyo POCO X3 Pro waqti xaddidan
Apps-ka ugu fiican ee lagu sameeyo isku-xidhka sawirrada oo lagu qurxiyo
6-da shabakadood ee ugu fiican ee lagu daawado filimada bilaashka ah onlayn